Dadka ku geeriyooday Foolkaanada iyo Tsunami ee Induniisiya oo sii korortay – Radio Daljir
Dadka ku geeriyooday Foolkaanada iyo Tsunami ee Induniisiya oo sii korortay
Diseenbar 24, 2018 5:04 b 0
Shacabka degan dhulka xeebaha u dhow ee Induniysa ee Anak Krakatau ayaa looga digay inay ka fogaadaan xeebta, iyadoo ay soo baxayso baqdin laga qabo in foolkaano hor leh iyo badgariirka Tsunami ay ku dhufato, iyadoo jaziiradaha Sumatra iyo Java ay ku geeriyoodeen 281 ruux ilaa iyo maalinimadii Sabtidii, 1,016 ruux ayaana ku dhaawacmay.
Waxaa la filayaa in Foolkaanada ay ka qarxi karto dhulka badda ka hooseeya, iyo mowjado badda ay samaynayso.
Anak Krakatau ayaa burbur iyo khasaare dhimasho kasoo gaaray Foolkaano qaraxday Axaddii, qiiq iyo dambas ayaa sidoo kalle ka muuqda deegaankaasi oo kadhashay Foolkaanada.
Afhayeenka Hay’adda Qaranka ee Maaraynta Masiibooyinka Sutopo Purwo Nugroho, ayaa shir jaraa’id ka sheegay in tsunami kalle ay suurtagal tahay inay dhacdo, iyadoona qaraxa foolkaanaha uu yahay mid wali ka jira qaybo ka mid ah magaalada Anak Krakatau.
Shacabka ayaa lasiinayaa digniino kusaabsan inay ka fogaadaan dhulka ay Volcanada ay ka qaraxday.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa xalinaya khilaafka guddiyada baarlamaanka